Iran iyo Midowga Yurub oo iska kaashanayo dagaalka ka dhanka argagixisada | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Iran iyo Midowga Yurub oo iska kaashanayo dagaalka ka dhanka argagixisada
Iran iyo Midowga Yurub oo iska kaashanayo dagaalka ka dhanka argagixisada
Sarkaal sare oo ka tirsan Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa ku celiyay in Dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ay diyaar u tahay iney si dhow dalalka Midowga Yurub kala shaqeyso dagaalka ka dhanka ah argagixisada.
Kullan dhexmaray diblomaasiyiin Midowga Yurub iyo Iran ayay warkan ku shaacisay Iran,sida lagu yiri war ka soo baxay Wasaaradda arrimaha dibada ee Xukuumadda Tehran.
“Kulankan, waxaa looga dhawaaqay in Iran ay diyaar u tahay wadashaqeyn dhammaystiran oo ballaaran sida arrimaha amniga iyo hirgelinta wadashaqeyn dhab ah oo si wadajir ah baaritaan loogu sameynayo,iyadoo kaashaneysa dalalka kale ee Midowga Yurub, “ayuu yiri Afhayeenka Wasaaradda Dibadda Iran Bahram Qassememi.
Kulankan yaa daba socda ka dib weerar hubaysan oo lala beegsaday Kolonyo ciidan oo ku sii jeeday magaalada koonfurta Iran ee Ahvaz 22-kii September. Waxaana lagu eedeeyay kooxda argagixisada ee al-Ahvaziya, weerarku wuxuu ku dhintay 25 qof, oo ay ku jiraan ilmo afar-jir ah.
Dowladaha Norwey, Sweden,Denmarka iyo Iran ayaa isku raacay iney hal meel uga soo wada jeestaan kooxaha argagaxisada,sida Qassemi uu sheegay,waxayna carabka ku adkeeyeen inaan la aqbali Karin oo lala xisaabtami doono cidii ganbaad u noqota.
Previous articleRa’isulwasaare Kheyre oo sheegay in Xukuumadda ka shaqeyneyso sidii dalka looga hirgelin lahaa isbedel Dhab ah.
Next articleAgaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta oo dhallinyarada ugu baaqay dib u dhiska dalka